it4a Services – it4a
Category: it4a Services
System Integration Services ဆိုတာဘာလဲ?
IT4A, it4a Services
ကျွန်တော်တို့ it4a မှဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Service တွေထဲက တစ်ခုကတော့ System Integration Service ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းသုံး Software များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး Transform ပြုလုပ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အကူအညီပေးနိုင်သော High Quality Solution တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Program managementProgram များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကို waterfall methodology ကိုအသုံးပြုပြီး risk နည်းပါးစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ Solution Architecture & DesignSolution များရဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ ဒီဇိုင်းများက cross module များရဲ့ Dependencies နဲ့ Process Integration များကိုဦးစားပေးပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့သော User Experience ကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း Functional and […]
Software ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ့် it4a ရဲ့ Support Service
ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ Software တွေသုံးတဲ့အခါ အရင်က သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ Software နဲ့ လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Software ကြားမှာ အခက်အခဲလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ အတွက် 𝗶𝘁𝟰𝗮 မှ High Quality Level ရှိတဲ့ Services3မျိုးကို 𝗶𝘁𝟰𝗮 ရဲ့ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 တစ်ချို့ကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ Data တွေကို Cloud မှာသိမ်းချင်တာမျိုး၊ Server ထောင်ပြီး On-premise သိမ်းချင်တာမျိုးရှိသလို တစ်ချို့ ကျတော့လည်း Hybrid Solution ဆိုပြီး Cloud မှာရော On-premise မှာပါ သိမ်းချင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ it4a ကတော့ customers […]
သင့်လုပ်ငန်းမှာ ERP Software သုံးချင်ပေမယ့် ဘယ်ကစရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါသလား?
ERP, it4a Services
နည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဒေတာတွေကို အဆင့်ဆင့်ကူးယူနေရတုန်းပဲလား ဋ္ဌာနတစ်ခုချင်းစီက ဒေတာတွေကိုလိုက်ရှာနေရတုန်းပဲလား တခြား 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 တွေကတော့ 𝗘𝗥𝗣 𝗦𝗔𝗣 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 တွေကို အသုံးပြုပြီး ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနေပြီနော်။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 တွေ အသုံးပြုချင်ပေမယ့် များပြားလွန်းတဲ့ 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 တွေနဲ့ 𝗙𝘂𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 တွေကြောင့် ဘယ် 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 ကို အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ဝေခွဲမရဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ 𝗶𝘁𝟰𝗮 ကိုအမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ 𝗶𝘁𝟰𝗮 မှ 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းရဲ့ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး 𝗘𝗥𝗣 𝗦𝗔𝗣 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 များမှ အသင့်တော်ဆုံး 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 များကို ဆွေးနွေးအကြံပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ 𝗶𝘁𝟰𝗮 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 တွင် – (၁) […]